Iyo yakanyunguduka tira, yakagadzirirwa senge chiteshi induction choto, ane a huwandu hwekubata huwandu hwe50 t uye inobatsira
dira-kurema huremu makumi mana t pamusoro-soro. Iyo meltdown simba inogadzirwa neane inductors akaisirwa at akatsanangurwa ma engles pa
hwoto hwevhu ne a yakazara yakabatana mutoro we3,400 kW. Imwe inductor inoratidzira yayo yakadzvanywa transformer kune yega kutonga mabasa.
In ari chiitiko yekundikana kweimwe inductor, vamwe vanobata chitsitsinho chinopisa at tembiricha apo inductor isina kukwana iri
kutsiviwa. Ivira racho rakagadzirira zvakare kugadzirwa kwemabasa mushure a nguva ye 12 maawa. Simbi yakanyungudutswa iri
akadirwa panze kuburikidza nechoto chinotakura uye chinogona kutamiswa at zero gradient to choto chekubata at ari mutengo pamusoro 4 t/h. Kubata-uye-kukanda vira inogamuchirawo kusungunuka kuburikidza nechoto chinotakura. Izvi zvinogonesa simbi to dzoserwa to vira rinonyungudika kana zvichidikanwa, saizvozvo at zero gradient.
Inductor Service Hupenyu uye Replacement nguva
The hupenyu hwebasa re inductor zvinoenderana neyakaiswa chinzvimbo, ari mhando kutonhora hurongwa, chimiro gwara, uye nemhando yeceramic lining. Sevhisi hupenyu hwemazuva mazana maviri nemakumi maviri hunonzi hwemhepo-dzaserera inductors Rated at 250 kW, asi chete 100 mazuva e400 kW ratings. In zvose zviri zviviri Muzviitiko, iyo simbi yekupfuura yaive ingangoita chiuru nemazana matanhatu t aruminiyamu.4
Nokuvandudza kutonhora Chaizvoizvo uye mhando yeceramic lining, zvinogoneka mazana mana-kW inductors ku attain hupenyu hupenyu hwe
Mazuva 250 uye zvimwe ne simbi inopfuura ye2,500 t/inductor. zvisinei, hupenyu hwebasa chete 100 mazuva zvakare hazvizivikanwe. Chimwe chirimwa chinoshanda mishumo hupenyu hwekushumirwa zvinhu pamusoro 15-27 mwedzi.
Yakakwirira inductor zviyero zve 900 kW uye zvimwe nepromitengo yemidziyo pamusoro 30 t/ zuva pazuva inductor, kunetseka kutungamirwa
kuyerera kweiyo simbi uye nyanyisa kutonhora, vane kwete zvakadaro yanga ichishanda chero nguva yakareba. Chiitiko chekutanga chakaratidza kuti kuyerera zvine simba zvikonzero kukurwa kwevhu mu mira Channels.
Even kunyange zvaive kwete zvakafanira to chenesa nzira, iyo kuda sevhisi hupenyu hwe inductor aiva kuderedza. FurTher kuvandudza kwakaitwa nekudzora pasi zvakatungamira kuyerera uye nekupa a yakagadzikana mvura kunonoka
system, iyo inopa tariro nokuti kuwana hupenyu hwebasa zvinhu pamusoro 12 mwedzi kune vekumusoro-inductors emagetsi.
Aluminium chinyorwa chinogona kugadziriswa muzvikamu zvakasiyana-siyana zvinonyungudika:
• chaipoipo-kudziya huni (gasi kana mafuta-akadzingwa) ine kupisa kupisa nzvimbo
• induction inonyungudika mavira, chiteshi kana rudzi runyoro.
Sarudzo yeyuniti inoonekwa zvakanyanya nekuwanikwa uye chimiro chesimba uye kugadzirwa mari.
Iko kuwanisa mafuta kwazvino kunoda isu to re-Ongorora kuwanikwa kwayo mune ramangwana. It is to zvinotarisirwa kuti Kukwira kwemitengo yemafuta kuchasanganisirawo an kuwedzera mumutengo wesimba rinotsiva- magetsi- apa pakufunga fanira be kupihwa
pamusoro pezvose to iko kushandiswa kwakanyanya kweiyo fomu yesimba rinotsiva. Pano, iyo induction vira inopa a
yakakwirira-simba rekuisa mashandisiro, nekuti kupisa kunogadzirwa nemagetsi induction yakananga mubhavhu.
Basa rinokwira mari munyika dzakasimukira uye mitengo yesimbi yepamusoro inotimanikidza to remelt kunyangwe yakaderera-giredhi, chiedza-gauge chinyorwa uye to shandisa a nzvimbo inonyunguduka panokosha zvinhu kuti sarudza kugadzirisa mari yakaderera, kureva simba mari, nyanya kurasikirwa, maintenance mari, uye kushanda mari.
Categories Technologies Tags aluminium induction oven, aluminium yakanyunguduka, aluminium inopisa furna, aluminium muzinga wevheni, aluminium smelting, aluminium inopisa furna, tenga aluminium smelter, induction aluminium furnace, induction melting aluminium, induction inonyungudutsa ovhoni, induction inonyungudutsa aluminium vira, yakanyunguduka aruminiyamu zvimedu Post navigation